(၁၀)နှစ်အတွင်း ကစားခဲ့တာက (၁၁)ပွဲ၊ ရခဲ့တဲ့ဖလားက (၁၂)ခု
ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့ အရေအတွက်ထက် ဆုဖလားပိုရခဲ့တဲ့ ဘင်ဖီကာဂိုးသမား
20 Nov 2018 . 11:27 AM
ဘင်ဖီကာအသင်းရဲ့ ၀ါရင့်ဂိုးသမား ပေါ်လိုလိုပက်စ် Paulo Lopes ရဲ့ နာမည်ကို ပရိသတ်တွေ ကြားဖူးချင်မှ ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဘင်ဖီကာ ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်တောင် လိုပက်စ်နဲ့ လမ်းမှာတွေ့ရင် သူ့ကို မှတ်မိပါ့မလားပဲ။ လိုပက်စ်ဟာ အခုဆိုရင် ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူသွားပြီဖြစ်ပြီး အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာက ဘင်ဖီကာအသင်းအတွက် (၁၁)ပွဲသာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် အသင်းနဲ့အတူ ပေါ်တူဂီအမှတ်ပေးဖလား အပါအ၀င် ဆုဖလား (၁၂)လုံးအထိ ရယူနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၄၀)အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူဂီဂိုးသမား လိုပက်စ်ဟာ ဘင်ဖီကာအသင်းမှာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကြာ ကစားခဲ့ပေမယ့် နံပါတ်(၁)မဖြစ်ခဲ့ဘဲ တတိယဦးစားပေးဂိုးသမားသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှတော့ သူဟာ အောင်မြင်မှုအများဆုံး တတိယဦးစားပေးဂိုးသမားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဘင်ဖီကာလူငယ်အသင်းကနေ ထွက်ပေါ်ခဲ့သူ လိုပက်စ်ဟာ ၁၉၉၇ မှာ စီနီယာအသင်းအတွက် ခေါ်ယူခံခဲ့ရပေမယ့် တစ်ပွဲမှ မကစားခဲ့ရဘဲ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တယ်။ ၂၀၁၂ မှာ ဘင်ဖီကာအသင်းက လိုပက်စ်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး အသင်းဟောင်းဆီက ဖုန်းနဲ့တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ချိန်မှာ လိုပက်စ်တစ်ယောက် မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၂၊ အောက်တိုဘာ (၁၈) ရက်၊ S.C. Freamunde နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အသင်းအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး သူ အနှစ်နှစ်အလလ စောင့်မျှော်နေတဲ့ ရည်မှန်းချက် ပြည့်မြောက်ခဲ့တယ်။ (၆)နှစ်အကြာမှာတော့ လိုပက်စ်ဟာ ဘောလုံးလောကကို စွန့်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဘင်ဖီကာ ယူ-၂၃နည်းပြအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားတော့မှာပါ။ လိုပက်စ်က “ဆုဖလားတွေ၊ ဆုတံဆိပ်တွေကို မြင်တိုင်း ကျွန်တော် စိတ်ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အသင်းလိုက်စုစည်းမှု၊ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ရရှိခဲ့တာလို့ ခံစားမိပြီး ကျွန်တော့်ဂိုးသမားဘ၀တစ်လျှောက် ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေလို့လည်း သတ်မှတ်ရမှာပါ”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။
လိုပက်စ်အနေနဲ့ ဒီဆုဖလားတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရခဲ့တာ ဟုတ်၊ မဟုတ်ကတော့ အငြင်းပွားစရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လိုပက်စ်ဟာ သူ့ဘ၀ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အားပေးခဲ့တဲ့ ဘင်ဖီကာအသင်းနဲ့ ဆုဖလားတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တာဟာ သူ့အတွက် ကျေနပ်စရာလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါ . . .
Photo:Benfica90,dreamteamfc,Diário de Notícias
ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရတဲ့ အရအေတှကျထကျ ဆုဖလားပိုရခဲ့တဲ့ ဘငျဖီကာဂိုးသမား
ဘငျဖီကာအသငျးရဲ့ ဝါရငျ့ဂိုးသမား ပျေါလိုလိုပကျဈ Paulo Lopes ရဲ့ နာမညျကို ပရိသတျတှေ ကွားဖူးခငျြမှ ကွားဖူးပါလိမျ့မယျ။ ဘငျဖီကာ ပရိသတျတှကေိုယျတိုငျတောငျ လိုပကျဈနဲ့ လမျးမှာတှရေ့ငျ သူ့ကို မှတျမိပါ့မလားပဲ။ လိုပကျဈဟာ အခုဆိုရငျ ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူသှားပွီဖွဈပွီး အံ့အားသငျ့စရာကောငျးတာက ဘငျဖီကာအသငျးအတှကျ (၁၁)ပှဲသာ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ အသငျးနဲ့အတူ ပျေါတူဂီအမှတျပေးဖလား အပါအဝငျ ဆုဖလား (၁၂)လုံးအထိ ရယူနိုငျခဲ့လို့ဖွဈပါတယျ။
အသကျ(၄၀)အရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ပျေါတူဂီဂိုးသမား လိုပကျဈဟာ ဘငျဖီကာအသငျးမှာ ဆယျစုနှဈ တဈခုကွာ ကစားခဲ့ပမေယျ့ နံပါတျ(၁)မဖွဈခဲ့ဘဲ တတိယဦးစားပေးဂိုးသမားသာဖွဈခဲ့ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုအခြိနျမှတော့ သူဟာ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး တတိယဦးစားပေးဂိုးသမားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့ပါပွီ။ ဘငျဖီကာလူငယျအသငျးကနေ ထှကျပျေါခဲ့သူ လိုပကျဈဟာ ၁၉၉၇ မှာ စီနီယာအသငျးအတှကျ ချေါယူခံခဲ့ရပမေယျ့ တဈပှဲမှ မကစားခဲ့ရဘဲ ၂၀၀၂ ခုနှဈမှာ အသငျးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့တယျ။ ၂၀၁၂ မှာ ဘငျဖီကာအသငျးက လိုပကျဈကို ပွနျလညျချေါယူခဲ့ပွီး အသငျးဟောငျးဆီက ဖုနျးနဲ့တဈဆငျ့ ဆကျသှယျခဲ့ခြိနျမှာ လိုပကျဈတဈယောကျ မယုံနိုငျလောကျအောငျ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
၂၀၁၂၊ အောကျတိုဘာ (၁၈) ရကျ၊ S.C. Freamunde နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အသငျးအတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ပါဝငျကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး သူ အနှဈနှဈအလလ စောငျ့မြှျောနတေဲ့ ရညျမှနျးခကျြ ပွညျ့မွောကျခဲ့တယျ။ (၆)နှဈအကွာမှာတော့ လိုပကျဈဟာ ဘောလုံးလောကကို စှနျ့ခှာဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီး ဘငျဖီကာ ယူ-၂၃နညျးပွအဖွဈ ဆောငျရှကျသှားတော့မှာပါ။ လိုပကျဈက “ဆုဖလားတှေ၊ ဆုတံဆိပျတှကေို မွငျတိုငျး ကြှနျတျော စိတျကနြေပျဂုဏျယူမိပါတယျ။ ဒါတှဟော အသငျးလိုကျစုစညျးမှု၊ ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ ရရှိခဲ့တာလို့ ခံစားမိပွီး ကြှနျတေျာ့ဂိုးသမားဘဝတဈလြှောကျ ရရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှလေို့လညျး သတျမှတျရမှာပါ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။
လိုပကျဈအနနေဲ့ ဒီဆုဖလားတှကေို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ကိုငျမွှောကျခှငျ့ရခဲ့တာ ဟုတျ၊ မဟုတျကတော့ အငွငျးပှားစရာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ လိုပကျဈဟာ သူ့ဘဝရညျမှနျးခကျြအတိုငျး ဖွဈမွောကျအောငျ ကွိုးစားခဲ့ပွီး ဘဝတဈလြှောကျလုံး အားပေးခဲ့တဲ့ ဘငျဖီကာအသငျးနဲ့ ဆုဖလားတှေ ရယူနိုငျခဲ့တာဟာ သူ့အတှကျ ကနြေပျစရာလို့ပဲ ပွောရတော့မှာပါ . . .